Posted by pandora at 2:59 PM
တဖန်ပြန်၍ မနိူးတဲ့ အနှစ်၂၀
မပန် ရေးခဲ့တဲ့ ရက်စွဲလေးကိုပဲ တင်ပေးထားတယ်နော်။ မပန်ကဗျာတွေက အတွေးလေးတွေ ပါတယ်။ သိုးလေး ကြိုက်တယ်။ အဲဒီစိတ္တဇညထဲ သိုးလေးလည်း အိပ်မက် မက်မယ်ထင်တယ်။
မပန်ကဗျာတွေကတော့ ဘယ်တော့ဖတ်ဖတ် မရိုးဘူးဗျာ ..။
မကြီးပန် ...တကူးတက လာဖိတ်လို့ ၀မ်းသာအယ်လဲ လာဖတ်ပါတယ်ဗျ။ ကဗျာရေးတာနားထားဦးမယ်ဆိုလို့ မဖတ်ရသေးဘူးထင်နေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ စကားပြေရေးတာလည်းရေးပေါ့ ကဗျာကိုလည်းေ၇းပါဦးဗျ။ မကြီးပန်ကို ဆရာလုပ်လိုက်ဦးမယ်ဗျ :) ပျော်ရွှင်ပါစေ :)
ကိုမေတ္တာ. ပြန်မနိုးတာက ပိုမိုက်နေပါလား
သိုးလေးရေ အိပ်မက်မက်မှာစိုးလို့ပါ ဆိုမှ
မျှားပြာ ညိမ်းညို ကိုပေါ ကိုယော.. ဟဲဟဲ. အားပေးကြတာ ကျေးဇူးပါ။
စီဘောက် ပိတ်ထားလို့ ဒီမှာ လာနှုတ်ဆက်ပါတယ် မောနင်းး :P
ကျွန်တော်လည်း cbox ပိတ်ထားလို့ ဒီမှာလာနုတ်ဆက်တာပါ။ မင်္ဂလာညချမ်းပါ မပန်။